Daawo: Ilbiriqsiyadii La Qabanaayey Haweeneyda Jisha Filimada Jinsiga, Jaceylkii Trump | Xaqiiqonews
Daawo: Ilbiriqsiyadii La Qabanaayey Haweeneyda Jisha Filimada Jinsiga, Jaceylkii Trump
Booliska magaalada Columbus ayaa soo galiyay xisaabtooda rasmiga ah ee YouTube, video muujinaya xiritaanka haweeneyda jisha filimada Galmada ah,Sturmie Daniels,ahna jaceylkii madaxweyne Donald Trump.
Xiritaanki toddobaadkii hore ayaa ka dhacay meel fagaare ah oo ay dowladdu maamusho ka dib markii ay booliisku ku eedeeyeen inay u oggolaatay rakaabkeeda inay taabtaan iyada si ka baxsan sharciga.
Michael Avinati, oo ah qareenka u doodaya ,ayaa ku dhawaaqay in macmiilkiisa la xiray markii ay soo bandhigtay bandhig baryahan dambe oo dhan ay ka waday guud ahaan dalka oo dhan, waxaa kale uu sheegay in xiritaanka haweeneydani jisha filimada uu yahay mid siyaasadeed.
Stormy Daniels,oo ah haweeneydan jisha filimyada gaarka u ah dadka waaweyn ayaa magaceeda waxa uu ku faafay warbaahinta kadib markii la sheegay inay xiriir la leedahay “Trump” 2006-2007-dii.
Wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegey in mid ka mid ah qareenada Donald Trump ay bixiyeen $ 130,000 si ay ugu qasbaan haweeneyda filimada galmada jisha in ay ka aamusto xiriir galmo oo dhaxmaray iyada iyo Donald Trump sanadkii 2006-dii.